रेस्लर युनिकाको गीतमा टिकटक प्रतिस्पर्धा - Dharahara Online
जी. बि. क्षेत्रीको शब्द तथा विकास चौधरीको संगीतमा भगवती खड्का युनिकाले स्वर दिएको गीत “हामी खस क्षेत्री ” गीतमा टिकटक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यसमा सहभागी भएर विजयी हुने प्रतियोगीलाई क्षेत्री दिवसको अवसर पारेर पुरस्कार समेत दिइनेछ । सहभागी हुन केहि नियम पनि बनाईएको छ ।
राष्ट्रिय पहिचान हुने गरि क्षेत्रीको भेषभुषा लगाउनु पर्नेछ । महिलाको हकमा फरिया चोलो पटुकी र पुरुषको हकमा सेतो दौरा सुरुवाल कालो जुत्ता ढाका टोपी लगाएको हुनुपर्ने छ । सहमागीहरूले आफ्नो टिकटक भिडियो हामी खस क्षेत्रीको फेसबुक मेसेन्जरमा पठाउनु पर्ने छ । यहि असोज २० गतेसम्म भिडियो आईपुग्नु पर्ने छ ।
संन्तोष र हरिहर फेरि संगीतमा नयॉ गीत लिएर
समृद्धी परियारको स्वरमा ‘साह्रै याद आउछ’
श्रद्धा र बादलको स्वरमा “तिमी हिड्ने बाँटो “